Kedu "Ụgha Intanet"? - Ihe nmalite na-enye azịza ya
Ịntanetị bụ akụnụba akụ na ụba, nke nwere ọtụtụ uru maka ọtụtụ ndị ọrụ ya. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike iji ohere ahịa, nke internet nwere. Ulo oru ndi n'adoro ahia ndi mmadu no n'uwa. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị mmadụ na-ewu weebụsaịtị na ndị ọrụ njedebe. E nwere oke ohere ị na-atụle nchebe cyber na ntanetị gị - comprar oculos espelhado vermelho. Otú ọ dị, ịghọ aghụghọ nke ịntanetị nwere ike ime ka ebe ị na-azụmaahịa na-echekwa site na njikọta nke ọtụtụ usoro ụzọ mbanye anataghị ikike.
Ọmụma banyere ịghọ aghụghọ nke ịntanetị nwere ike ịba uru na saịtị ahụ n'ozuzu ahia ahia dịka Search Engine Optimization (SEO) dabere na ịdị irè nke atụmatụ nchedo weebụ. Google nwere ike ịche saịtị dịka enweghị nchedo, nke nwere ike ime ka ụfọdụ ndị na-azụ ahịa na-atụ egwu imekọrịta na saịtị ahụ. Ọ dịkwa mkpa ịkọ akụkọ banyere ịntanetị ozugbo. Ị nwere ike ịchekwa nchekwa nke ndị ahịa gị nakwa nke azụmahịa gị.
Ross Barber, Semalt Onye ahịa na-ahụ maka ihe ntanetị, na-enye gị ịtụle ụdị aghụghọ ịntanetị ndị a:
Hacking. Ndị na-agba ọsọ bụ ndị ọkachamara na kọmputa nwere ike ịhazi usoro ma nweta nbanye na-enweghị ikike na ọtụtụ usoro..Ịhapụ ebe ndị omempụ dị mkpa. Ndị na-eme ihe ike nwere ike ime ka azụmahịa kwụsị ọrụ ha n'ihi mwakpo DoS. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ịghọ aghụghọ ịntanetị dị ka kaadị akwụmụgwọ kaadị akwụmụgwọ na-eme site na enyemaka nke ndị omempụ. Ọ dị mkpa iji lezie anya maka usoro hacking dị ka SQL ogwu ogbugba yana Cross Site Scripting (XSS). Ị nwekwara ike ịmepụta mgbasa ozi mgbasa ozi maka ndị ahịa gị na-agwa ha ndụmọdụ ndị dị mkpa iji nọrọ na nchebe.
Spamming. Ozi spam bụ ozi ịntanetị nke na-enwekarị ihe doro anya kpatara ha. Ndị Spammers ji ụdị usoro niile mee ka ndị na-achị ha pịa njikọ nke na-emerụ emerụ ma ọ bụ na-akpata mmetụta ọjọọ. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịnwe Trojans bụ ndị nwere ike ịnwepụ kọmputa kọmputa ma wepụ ihe ọmụma bara uru. Nje virus ndị a nwekwara ike imebi usoro faịlụ niile nke na - eduga n'iwe ọrụ na kọmputa kọmputa.
Phishing. Phishing bụ ụzọ nke ọtụtụ ndị aghụghọ na-eji na-aghọgbu ndị mmadụ n'inye nzere nbanye. O nwekwara ike imebi ozi ndị ọzọ dị mkpa yana ịme ọtụtụ ndị ọzọ hacks. Phishing gụnyere ịmepụta ibe weebụ. Onye na-ahụ ihe nlekota ahụ ga-achọrịrị ụzọ iji tụọ onye ahụ ahụhụ iji tinye ebe nrụọrụ weebụ adịgboroja dị ka onye ziri ezi. Ndị ọrụ nwere ike ịnweta ohere na-enweghị isi na ndị ahịa na-enweghị nkwenye ha.
Nchedo Cyber ​​bụ ihe dị mkpa maka ọtụtụ weebụsaịtị e-commerce. Ọ dị mkpa ịmepụta saịtị nke nwere nchedo site na ọrụ nke ndị na-agba ọsọ na nke nwere ike ikwe ka ndị ahịa zụta ihe n'enweghị ọtụtụ ihe ọkụkụ. N'ihi ya, inwe ihe ọmụma zuru oke banyere ịghọ aghụghọ n'Ịntanet bụ ihe dị mkpa. Otutu onodu nke onu ogugu na ihe ndi mmadu na-eme bu n'ihi na ndi mmadu enweghi mmata nke ndi agha ahu. N'ihi ya, steeti cyber nche nọrọ na ọnọdụ dị njọ. Nke a ndu nwere mkpa internet aghụghọ aghụghọ. Ihe ndị dị ka kaadị akwụmụgwọ kaadị akwụmụgwọ na njide ohi nwere ike ghara ihu gị mgbe ị na-etinye usoro ndị a.